ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် Buckthorn ဖယောင်းတိုင်
ပင်လယ် buckthorn ဖယောင်းတိုင်မကြာခဏကိုယ်ဝန်စဉ်အတွင်းအသုံးပြုနေကြသည်ကဲ့သို့သောပြင်ဆင်မှု။ ဒါဟာဆေးပညာအားသာချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ကြောင့်အစိတ်အပိုင်းများအတွက် placental အတားအဆီးကိုဖြတ်ကျော်ကြဘူးနှင့်သန္ဓေသားအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုငှါ, မူးယစ်ဆေးဝါးကိုယ်ဝန်ဖြစ်စဉ်ကိုတလျှောက်လုံးသုံးနိုင်တယ်။ ပိုပြီးအသေးစိတ်အတွက်ပင်လယ် buckthorn ရေနံနှင့်အတူဖယောင်းတိုင်အတိုင်းဤမူးယစ်ဆေးကိုစဉ်းစားပါနဲ့အထဲကရှာတွေ့: ကကိုယ်ဝန်စဉ်အတွင်းအသုံးပြုဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိမရှိနှင့်ဘယ်လိုလုပ်ဖို့။
မူးယစ်ဆေးဝါး၏ဖန်တီးမှုများအတွက်အခြေခံဖြစ်သော Berry ဟာသူ့ဟာသူ, ဆေးဖက်ဝင်ဂုဏ်သတ္တိများ၏နံပါတ်ရှိပါသည်။ ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အပျေါမှာအောက်ပါဆိုးကျိုးများပြုမူနိုင်ကဤကြောင့်:
အဆိုပါမွှားအကျိုးသက်ရောက်မှု။ ပိုးမွှားသက်ရှိများ၏ ingress ကာကွယ်ခြင်း, ပြင်ဆင်မှုကောင်းကောင်းတစ်ဦး prophylactic အေးဂျင့်အဖြစ်အဖြစ်နာတာရှည်ရောဂါကုသမှုများအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ဒါဟာသိသာ Anti-inflammatory အရေးယူထားပါတယ်။
Excellent ကအဆိုပါသစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုးသည့်လုပ်ငန်းစဉ်မှအထောက်အကူပြုပျက်စီးသွားသောဒေသများ restore ။
ဤရွေ့ကားအကျိုးရှိသောအဓိကအားကြောင့်အသီး၏ဂုဏ်သတ္တိများ, င်း၏ဖွဲ့စည်းမှု။ ဒါဟာဗီတာမင်နဲ့အာဟာရတွေအများကြီးပါရှိသည်။ တစ်ဦးက, K သည်, C, သဲလွန်စ element တွေကိုသံ, မဂ္ဂနီဆီယမ်: သူတို့တွင်ဖြစ်ကြသည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် buckthorn ဖယောင်းတိုင်ကိုအသုံးပြုအဖြစ်?
ဒါဟာကလေးစောင့်ဆိုင်းနေစဉ်အတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးများမဆိုကြင်နာတစ်ခုတည်းကိုသာကိုယ်ဝန်ဆရာဝန်စောင့်ကြည့်ခန့်အပ်သင့်ကြောင်းသတိပြုသင့်ပါတယ်။ ဒါဟာလက်ရှိကိုယ်ဝန် buckthorn ဖယောင်းတိုင်ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါကဤကိစ္စတွင်အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်သောသူမူကားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မျှော်လင့်မိခင်ကိုယ်ဝန်၏ဆိုးကျိုးများမှရှောင်ရှားရန်စီမံခန့်ခွဲ။
ကိုယ်ဝန် buckthorn ဖယောင်းတိုင်မကြာခဏဝမ်းချုပ်များအတွက်အသုံးပြုကြသည်အခါ။ ကြောင့်နူးညံ့ပြော့ပျောင်း laxative အကျိုးသက်ရောက်မှုငှါ, မူးယစ်ဆေးဿုံဤရောဂါနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ကူညီပေးသည်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သျောလညျးအကြှနျုပျသဆေးဝါးတစ်ခုတည်းမဖြစ်သင့်နှင့် 3-4 နေ့ရက်ကာလအဘို့သည်ဟုဆိုရပေမည်။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်ညဥ့်အခါတဦးတည်းဖယောင်းတိုင်၏စအိုထဲသို့ဝင်။
ဒါဟာအစတာဝန်ပေးနိုင်ပါတယ်ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ, လိပ်ခေါင်းကနေကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်သညျထသည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်ရကျိုးနပ်သည် buckthorn ဖယောင်းတိုင်။ ဒီသင်တန်းကိုလက်ခံရရှိသည့်အခါ 10-14 ရက်အတွင်း (တစ်ဦးချင်းစီကိုသတ်မှတ်) ဖြစ်ပါသည်။ အများစုမှာမကြာခဏဆရာဝန်တစ်နေ့လျှင်တစ် suppository ၏တိုက်ရိုက်ကျမ်းပိုဒ်တစ်ခုနှစ်ဆမိတ်ဆက်စကားပြဌာန်းထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်လိုအပ်သောကိုင်တွယ်ပြီးနောက် 5-10 မိနစ်အတွင်းမှာကအလျားလိုက်အနေအထား၌တည်ရှိ၏။
အဆိုပါ contraindications ဘာတွေလဲ?
ညွှန်ကြားချက်အရ, buckthorn ဖယောင်းတိုင်ဆရာဝန်တစ်ဦးနှင့်အတူတိုင်ပင်ပြီးနောက်ကိုယ်ဝန်စဉ်အတွင်းအသုံးပြုခဲ့သည်။ မည်သည့်မူးယစ်ဆေးနှင့်ဝသကဲ့သို့, ပင်လယ် buckthorn ရေနံနှင့်အတူဖယောင်းတိုင် contraindications ရှိသည်။ ဤရွေ့ကားတစ်ဦးချင်းစီသည်းမခံပါဝင်သည်။ ဆရာဝန်အမျိုးသမီး၏အခွအေနေပိုဆိုးလာပြီးနောက်မူးယစ်ဆေးဝါးအသုံးပြုမှု, အရေပြားတစ်ဖု, နီခြင်းရှိကြ၏သည့်အခါဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်,, က cancel သင့်ပါတယ်နှင့်တစ်ဦးမဖြစ်မနေအခြေခံပေါ်မှာသတင်းပို့ပါ။
ဒါဟာပင်လယ် buckthorn နှင့်အတူ suppositories ၏အသုံးပြုမှုကိုတချို့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကအဖော်ပြုစေခြင်းငှါပြောလည်းလိုအပ်ပေသည်။ ဤရွေ့ကားများပါဝင်သည်:
နာကျင်မှု (မူးယစ်ဆေးဝါး၏ရှည်လျားသောအရှည်) ။
suppository ၏အုပ်ချုပ်မှုပြီးနောက်ချက်ချင်းနီးပါးလေ့လာတွေ့ရှိအီ, တဖြည်းဖြည်းစအို mikrotreschinki ကိုထိုးဖောက်ဖို့အစပြုရာပင်လယ် buckthorn ဆီတီးရီးယားရောဂါပိုးဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။
ထို့ကြောင့်ဆောင်းပါးထဲကနေမြင်နိုင်ပါသည်အဖြစ်, buckthorn ဖယောင်းတိုင်အဘို့, ကိုယ်ဝန်စဉ်အတွင်းအသုံးပြုမယ့်ကြီးမြတ်မူးယစ်ဆေးများမှာ လိပ်ခေါင်း၏ကုသမှု, နှင့်အတူကူညီမယ့်နည်းလမ်းအဖြစ် ချုပ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင် 39 ရက်သတ္တပတ် - ကလေးမွေးဖွားဆိုင်းဘုတ်များ
9 ရက်သတ္တပတ်ကိုယ်ဝန် - သန္ဓေသားဖှံ့ဖွိုးတိုးတ
က Eleven pronatal - ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အသုံးပြုရန်ညွှန်ကြားချက်
ကိုယ်ဝန်ဆောင် 16 ရက်သတ္တပတ် - ဘာဖြစ်သွားမလဲ
မတည့်ချောင်းဆိုးရင်ကျပ် - အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင်ရောဂါလက္ခဏာ
Oatmeal cookies တွေကို - စာရွက်
စိန့်ပီတာစဘတ် - ဆွဲဆောင်မှုများ
8 အကျော်ကြားဆုံးမင်္ဂလာဆောင်အနမ်း Royal
Bang နှင့်အတူ Ponytail ဆံပင်
မျက်ဝန်း - အချိန်သည်ဆောင်းကာလအဘို့ပြင်ဆင်
Zara ငွေကောက်ခံနွေ-နွေရာသီ 2013